Nimcada Ilaahay, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Nimco waa ereyga ugu horreeya magaceena maxaa yeelay waxay si fiican u qeexeysaa shaqsigeenna iyo safarka aan isla wadaagno ee xagga Ciise Masiix xagga Ruuxa Quduuska ah. "Taa bedelkeeda, waxaan aaminsanahay inay nimcadda Rabbi Ciise ku badbaadi doonno iyaga siday iyaguna ahaan doonaan" (Falimaha 15, 11). Waxaynu nahay "xaq uma lihin nimcadiisa nimcadiisa xagga madax furashada xagga Ciise Masiix" (Rooma 3:24). Nimco ayaa Ilaah inaga tegayaa (Masiixa ku dhex Wadaaga) qaybtiisa xaqnimadiisa. Baybalku wuxuu had iyo jeer ina barayaa in fariinta iimaanka ay tahay farriin ku saabsan nimcada Ilaah (Falimaha Rasuullada 14,3; 20,24; 20,32).
Xukunkayaga sharciga hoos ku qoran waa cadaalad oo waa xaq. Annagu nafteenna kama helno dhaqan sharci ah maxaa yeelay Ilaah ma aha maxbuus u ah xeerarkiisa iyo sharciyadiisa. Ilaah inagu dhex shaqeeyaa xorriyadda rabbaaniga ah ee raacaysa doonistiisa. Doonistiisa waxaa lagu qeexay nimco iyo madax furasho. Rasuul Bawlos wuxuu soo qoray waxyaabaha soo socda: “Ma tuurayo nimcada Ilaah; maxaa yeelay, haddii caddaaladdu ka timaado sharciga, Masiix wuxuu u dhintey wax aan waxtar lahayn. (Galatiya 2:21). Bawlos wuxuu ku tilmaamay nimcada Ilaah inay tahay tan kaliya ee uusan rabin inuu tuuro. Nimcadu ma aha wax la miisaamay oo la cabbiri karo oo laga ganacsan karo. Nimco waa wanaagga nololeed ee Eebbe ee uu ku raacdo qalbiga iyo maskaxda aadanaha oo labadoodaba is beddelo. Waraaq uu u diray kaniisadda Rome, ayuu Bawlos ku qoray in waxa kaliya ee aan iskudayno in aan ku gaarno dadaalkeenna ay tahay bixinta dembiga, oo ah dhimashada lafteeda. Laakiin sidoo kale waxaa jira mid gaar ah oo wanaagsan, maxaa yeelay "hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix" (Rooma 6:24). Ciise waa nimcada Ilaah. Waa furashada Ilaah oo loo sii daayay dadka oo dhan.